Keio University - Higher Education an-tany hafa tany Japon
Créé : 1858
mpianatra (eo ho eo.) : 34000
Aza adino ny miresaka momba Keio University
Misoratra anarana ao amin'ny Keio University
Keio dia miorina ao Tokyo sy Kanagawa, iray amin'ireo lehibe indrindra eran-tanàn-dehibe lehibe faritra. Ny fiainana ao Tokyo dia fahafahana hiaina ny renivohitra Japana amin'ny alalan'ny tanàna sy ny maro mifanohitra tarehy: tsy manam-paharoa fomba amam-panao, voajanahary tsara tarehy, ary futuristic teknolojia. Rehetra ny maoderina manginy sy ny conveniences ny tanàna maoderina, Vao tsy ela akory i Tokyo laharana ny tsara indrindra eran-tanàna mba hiaina ao, ary koa iray amin'ireo ny azo antoka sy madio. Tokyo ihany koa ny mety vavahady ho an'ny rehetra Japana sy ny sisa Asia.
Mankanesa any Keio ary manomboka ny manokana dia noho ny fon'ny tanàna, ny mifanohitra hitan'ny olona, ​​ary feo ny Keio ny anjerimanontolo sy ny ataony ankoatra ny fianarana.
Aiza ianao no mipetraka dia zava-dehibe toy izay mandalina. Keio omen'ilay mpianatra aina, velona soa aman-tsara izay mampirisika ny fifaneraserana tontolon'ny mbola mamela ny fiainana manokana, mba afaka mahazo ny orinasa ny tanora, fa koa, misy toerana malalaka hianatra fa manaraka fanadinana. Ary amin'ny ambany be vola lany noho ny azo ampitahaina anjerimanontolo any an-kafa tany Japon sy any ivelany. Mpianatra iraisam-pirenena dia afaka ho iray manontolo eny amin'ny vatsim-pianarana, ary ny Biraon'ny Mpianatra Services tsy ampy ny hanampy ireo mpianatra amin'ny mety hiatrika ireo olana eo amin'ny fiainana andavanandro.
Ivelan'ny efitrano fianarana (ary ny dorm efitrano), izay manatanteraka faminaniana toeram-pianarana ny fiainana miandry. Misy ny 450 langilangy sy ny fiaraha-monina nihazakazaka an-tsitrapo ny mpianatra ho fomba rehetra ny fanatanjahan-tena sy ny tombontsoa. Manatreha iray amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena malaza hitafy ny Keio University Athletic Association, izay amin'izao fotoana izao dia manana 40 ofisialy langilangy sy ny ekipa. Aza adino ny hiaraka iray ny mpianatra Keio-mihazakazaka fonenan'ny mpianatra fety, izay manan-danja Zava-nisongadina Tamin'ny taona akademika, ary natao isan-taona eo amin'ny tsirairay ny campus Keio tahaka ny sasany tamin'ireny zava-nitranga ny mpianatra lehibe indrindra na aiza na aiza tany Japon.
Isika ankehitriny, miaina ao anatin'ny andro ny fiovana lehibe. Ireo fiovana toy ny fiakaran'ny mari-panan'ny, fahanteran'ny mponina, mahery vaika maneran-tsena fifaninanana, ary ny mandrakizay-fanitarana toerana aterineto dia ifotony manova ny rehetra firafitry ny fiaraha-monina iainantsika ao. Tamin'ny fotoana toy izany ny fiovana lehibe, dia ho lasa bebe kokoa sarotra ho antsika ny mandinika sy hamaha olana ny zavatra toy ny hoe fanitarana fotsiny izy ireo ny lasa.
Inona no ilaina eto dia ny fahafahana hahatakatra ny toe-javatra vaovao sy handray asa mety mifototra amin'ny fahatakarana ity. Amin'ny teny hafa dia ny fahafahana mieritreritra ho anao ho kokoa tinady. More manokana, ny fahafahana mieritreritra ho an'ny tenanao dia ny dingana amin'ny famantarana ny olana, manazava ny olana, manamarina ny fanazavana mba hamantarana na mihazona, ary raha ny fanazavana tokoa no mihazona, mamerina izany ho asa mba hanangana vahaolana. Izany no fomba fiasan'ny ny fianarana-ny famantarana ny olana voavaha, fanorenana ny petra-kevitra izay manazava ny olana mazava, ka mizaha toetra ny petra-kevitra ara-tsiansa isan-karazany amin'ny alalan'ny fomba mba hahatongavana amin'ny famaranana.
Noho izany, ny fahafahana mieritreritra ho an'ny tenanao no, raha ny tena izy, azo amin'ny fianarana, ary izany no antony mahatonga ny mpanorina Yukichi Fukuzawa, izay ihany koa ny nitoetra tao an-andro ny fiovana lehibe avy amin'ny feudal Edo ho any amin'ny vanim-potoana maoderina Meiji, Nanamafy ny maha zava-dehibe ny fianarana. Amin'ny fotoana tetezamita lehibe, nitarika miandalana, nitarika fikarohana lasa miha manan-danja. Ohatra, tokony hanohy na in-lalina sy interdisciplinary fikarohana izay afaka mamaha izany olana toy ny fiakaran'ny mari-panan'ny sy ny mponina fahanterana, izay mandrahona ny faharetan'ny ny fiaraha-monina, ary ny famoronana fikarohana izay afaka mamokatra sarobidy vaovao mba hahatonga ny fiaraha-monina manankarena kokoa na dia eo aza masiaka fifaninanana eran-tsena sy ny fanitarana ny toerana an-tserasera.
Mba hampiroborobo ireo karazana fikarohana, Keio University dia manao ny ezaka rehetra mba hanome ny tsara kokoa ny tontolo iainana izay miasa mafy-mpikambana sy ny sampam-pianarana ireo mpianatra, izay nanolo-tena ho ny fikarohana ao amin'ny siansa momba ny zavaboary, siansa ara-tsosialy, ary humanities, dia afaka takatsika tsara ny fahaiza-manao. Ny mpanorina Yukichi Fukuzawa nametraka Keio University handray anjara amin'ny fiaraha-monina amin'ny alalan'ny fianarana amin'ny andro lehibe fiovana, ary maniry ny hahatakatra ny nanorenana fitsipika eo amin'ny tontolo ankehitriny amin'ny alalan'ny hanampy amin'ny olona izay afaka mieritreritra ho an'ny tenany sy ny hahazo fahendrena vaovao ho an'ny tombontsoan'ny fiaraha-monina.
Filoha, Keio University
Faculty of Business sy varotra
Fianarana ho Dokotera
Faculty ny Policy Management
Faculty ny tontolo iainana sy Information Fianarana
Faculty ny Nursing sy ny fitsaboana
Graduate School of Human Fifandraisana
Graduate School of Business sy varotra
Graduate School ny Siansa sy ny Teknolojia
Graduate School ny Media sy ny Fitantanam-pitondrana
Graduate School of Management System Design sy ny
Keio University dia naorina teo an 1858 toy ny Sekolin'ny tandrefana fanadihadiana miorina ao amin'ny trano iray amin'ireo trano any Tsukiji ny mpanorina Yukichi Fukuzawa. Ny fakany dia heverina ho toy ny Han Kokugaku sekoly ho an'ny fanadihadiana atao hoe Shinshu Kan hampitoerina amin'ny 1796. Keio nanova ny anarany ho “Keio Gijuku” in 1868, izay tonga avy amin'ny vanim-potoana anarana “Keio” ary “Gijuku” toy ny fandikan-teny amin'ny sekolim-panjakana. Ary nifindra tany amin'ny toerana amin'izao fotoana izao ao amin'ny 1871, nametraka ny Fitsaboana sekoly ao 1873, ary ny manam-pahefana amin'ny anjerimanontolo departemanta Toekarena, Lalàna sy ny fianarana mamaky teny sy manoratra ao 1890.
Ianao ve mila miresaka momba Keio University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Keio University ao amin'ny Map
Photos: Keio University ofisialy Facebook
Keio University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Keio University.